I-China High Quality Electrical Prefabricated Substation Substation I-wholesale-shengte abakhiqizi nabaphakeli |Shengte
Isiteji Esisezingeni Eliphezulu Seziqukathi Esakhiwe Kagesi Esisezingeni Eliphezulu I-wholesale-shengte
Isiteshi esincane esifakwe ngaphambili (esaziwa nangokuthi i-European box transformer), ngokuhambisana namazinga e-GB/T17467-1998 kanye ne-IEC1330, ukufakwa okuguquguqukayo nokulula, ukulahlekelwa okuphansi, umsindo ophansi, isifunda esifushane kanye nokumelana nokulayisha ngokweqile.
Ilungele izikhungo zezentengiselwano, izifunda zokuhlala, amabhizinisi ezimboni nezezimayini, izibhedlela, izikole, izikhumulo zezindiza, iziteshi, amachweba, umzila ongaphansi komhlaba nezinye izindawo.I-YBM ne-YBP ziyizinhlobo ezimbili zesakhiwo.
Isakhiwo sesiteshi esincane "iso" noma "umkhiqizo".
Impahla yegobolondo yomkhiqizo ipuleti le-aluminium alloy, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti eliyinhlanganisela, ipuleti likasimende eliqiniswe nge-fiber yengilazi, njll.
Isizinda sesiteshi esincane sakhiwe ngensimbi yamashaneli noma usimende onokumelana nokugqwala okuqinile namandla anele okusebenza.
Isembozo esiphezulu somzimba webhokisi samukela isakhiwo se-double-layer, esinokushisa okuhle kokushisa, ukuvikelwa kwemisebe kanye nomphumela wokungenisa umoya.
Igumbi ngalinye lesiteshi esincane lihlukaniswe ngensimbi, futhi igumbi ngalinye lifakwe izinto zokukhanyisa.I-G ephezulu ye-transformer ifakwe idivayisi yokukhipha okuzenzakalelayo ukuze ilungiswe
Umbala webhokisi uyavumelana nezimo futhi ungaxhunyaniswa nendawo ezungezile.
Isiteshi esincane esenziwe ngaphambili (esaziwa nangokuthi i-European box change), ngokuhambisana ne-GB/T17467-1998 standard kanye ne-IEC1330 ejwayelekile, ukufakwa okuguquguqukayo, ukulahlekelwa okuphansi, umsindo ophansi, ukumelana okuqinile kumjikelezo omfushane nokulayisha ngokweqile.Isebenza ezikhungweni zezentengiselwano, izindawo zokuhlala, izimboni nezimayini, izibhedlela, izikole, izikhumulo zezindiza, iziteshi, amachweba, imigwaqo engaphansi komhlaba nezinye izindawo.Kunezakhiwo ezimbili: igama elithi ifonti (YBM) kanye nohlobo lwefonti (YBP).
· Isivinini somoya: ≤ 34m/S (hhayi ngaphezu kuka-700pa);
· Izinga lokushisa le-ambient: izinga lokushisa eliphezulu +40℃, izinga lokushisa elincane -35℃;
· Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke asikho ngaphezu kuka-95%, futhi isilinganiso sanyanga zonke asingaphezu kuka-95%;
· I-Shockproof: Ukusheshisa okuvundlile akukho ngaphezu kuka-0.4m/s2,Ukusheshisa okuqondile akukho ngaphezu kuka-0.15mm/s2;
· Ukuthambekela kwendawo yokufaka: kungabi ngaphezu kuka-3°;
· Indawo yokufaka: Ifakwe endaweni lapho kungekho mlilo, ingozi yokuqhuma, ukungcola okukhulu, ukugqwala kwamakhemikhali kanye nokudlidliza okukhulu.
· Uma weqa le mibandela engenhla, ungaxoxisana nenkampani.
· Usayizi omncane, ukwakheka okuhlangene futhi kulula ukukufaka.
A. Isakhiwo sesiteshi esincane sihlelwe ngomumo "we-mesh" noma "umkhiqizo".
B. Impahla yegobolondo lomkhiqizo yenziwe ngepuleti le-aluminium alloy, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti eliyinhlanganisela, ibhodi likasimende eliqiniswe ngefayibha yengilazi, nokunye okunjalo.
C. Isisekelo sesiteshi esincane senziwa ngensimbi yamashaneli noma usimende, esinokumelana nokugqwala okuqinile namandla anele okusebenza.
D. Isembozo esiphezulu sekhabhinethi samukela isakhiwo se-double-layer, esinokushisa okuhle kokushisa, imisebe kanye nemiphumela yokukhipha umoya.
E. Igumbi ngalinye lesiteshi esincane lihlukaniswa negumbi elizimele ngokushaywa.Ikamelo ngalinye linezinsiza zokukhanyisa.Iphezulu ye-transformer ifakwe idivayisi yokukhipha umoya othomathikhi ukulungisa izinga lokushisa lekamelo le-transformer.
F. Ibhokisi liyashintshashintsha ngombala futhi lingaxhunyaniswa nendawo ezungezile.
Qaphela: ubukhulu be-prodcut nesisindo kuyidatha yesikhathi esithile futhi ingashintsha ngenxa yokuthuthukiswa komklamo.
Okwedlule: Intengo Engcono Kakhulu I-Low Voltage Switchgear GCS Low Voltage Drainage Switchgear Supplier-shengte MOQ 1pcs
Olandelayo: I-OEM Comined Transformer Electrical Box Type Transformer eneFactory Price-shengte
I-transformer yohlobo lwaseMelika
I-OEM Ehlanganisiwe Ye-Transformer Electrical Box Uhlobo Tr...
Inani Elingcono Kakhulu Ibhokisi elisha le-Transformer Professional Tra...